Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး၊ စကားစုများ - အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး၊ စကားစုများ - အပိုင်း (၂)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on November 1, 2013 at 10:01 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
9. In view of the fact that
"In view of the fact that" သည် "Inasmuch as" နှင့် အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
10. Now that
"Now that" သည် "cause and effect" ကြောင်း၊ ကျိုးပြစကားများကို informally ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် ပြပါသည်။
"Now that" ကို "Because" ဖြင့်လည်း အစားထိုးသုံးနိုင်ပါသည်။
"Now that you are here, we can proceed" ဟူသည့် ဝါကျကို "Because" ဖြင့် အစားထိုးပါက "Because that you are here, ..." အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည့် "မင်းဒီမှာရှိနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်" ကို အကြောင်းပြု၍ အကျိုးဆက် effect အနေဖြင့် "we can proceed." "ငါတို့ လုပ်လက်စအလုပ်/အလုပ်နောက်တစ်ခုကို ဆက်လုပ်လို့ရပြီ" ဟူသော ကြောင်းကျိုးပြဝါကျများကို ရေးသားနိုင်ပါသည်။
11. Out of
"Out of" သည် emotion and feeling စိတ်ခံစားမှုကို ရှင်းလင်းဖော်ပြရာ၌ "Because of" အစားသုံးပါသည်။
"She asked out of / because of compassion." ဟူသည့် ဝါကျတွင် "compassion" သည် feeling ဖြစ်ခြင်းကြောင့် "because of" အစား "out of" ကို သုံးပါသည်။
"Owing to" သည် "Due to" နှင့် တူပါသည်။ "Owing to" နှင့် "Due to" တို့သည် "Because of" ထက်ပို၍ formal ဖြစ်ပါသည်။
13. Seeing that
"Seeing that" သည် "Considering that" နှင့် တူပါသည်။
"Since" သည် "Because" အစားသုံးနိုင်သော်လည်း "Because" သည် ရိုးရှင်းသည့် informal အသုံးဖြစ်ပါသည်။
"Since" သည် grammar tense အလိုအရ Perfect tense များတွင်လည်း အသုံးပြုတတ်ပါသဖြင့် ရှုတ်ထွေးစေတတ်ပါသည်။
"Since it had rained, we didn't need to water the garden." ဟူသည့် ဝါကျတွင် ဝါကျ၏ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်သော "..., we didn't need to water the garden." ကို ဆက်၍ မဖတ်ပါက "Since .. " ကို "Because .. " အကြောင်းပြပုဒ်ဟု မှတ်ယူမည်မဟုတ်ဘဲ "Since it had rained, " "had rained" ဟူသော past perfect ကြောင့် "since" ကို အချိန်ပြပုဒ်အနေဖြင့် လွဲမှားကောက်ယူကောင်းကောက်ယူနိုင်ပါသည်။
"Thanks to" သည် "Because of" နှင့်တူသော်လည်း "Thanks to" ကို သုံးလျှင် "positive" သို့မဟုတ် "negative" အဓိပ္ပါယ်များ ထွက်နိုင်ပါသည်။
"Thanks to the donors that the victims could survive." တွင် "အလှူရှင်များ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဒုက္ခသည်များ ချမ်းသာရာရရှိနိုင်သည်။" ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ဆောင်သောကြောင့် positive ဖြစ်ပါသည်။
"Thanks to your meddling, we are receiving much unwanted attention." "Thanks to your meddling/Because of your interference" "မင်းရဲ့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့်" အစချီသည့် အကြောင်းကြောင့် consequence/asaresult ဆိုးကျိုးအားဖြင့် ဝါကျ၏ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်သော "we are receiving much unwanted attention." negative သဘောဆောင်သည့် "unwanted attention ကို ရရှိပါသည်။" ဟု negative outcome ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် "Thanks to" ကို သုံးပါက context ကို လိုက်၍ positive/negative အကောင်းအဆိုးကို နားလည်သဘောပေါက် ဝေခွဲတတ်ရန် လိုပါသည်။
"Through" သည် preposition ဖြစ်ပါသည်။ "Because of" အစား "Through" ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
"Through the efforts of these charities, the city's homeless services have been reinstated." ဟူသည့် ဝါကျ၏ ပထမပိုင်း "Through" အစား "Because of" ကို အစားထိုး၍ "Because of the efforts of these charities, ..." cause အကြောင်းအရင်းကြောင့် အကျိုးဆက်ဖြစ်သော "the city's homeless services have been reinstated." ဖြစ်လာပါသည်။
Mark Nichol ၏ 16 Substitutes for “Because” or “Because Of” ကို ကိုးကားရေးသားပါသည်။
Because နှင့် Because of ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သည့် စကားလုံး၊ စက...